Abaphathiswa bezoKhenketho baseYurophu badibana eCroatia ukuqhubela phambili uphuhliso, ubuchule kunye nentsebenziswano
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » abantu » Abaphathiswa bezoKhenketho baseYurophu badibana eCroatia ukuqhubela phambili uphuhliso, ubuchule kunye nentsebenziswano
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba eziseCroatia • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ngamana 29, 2019
Ubuchule, ubuhlakani kunye nokulawula ukwanda kwamanani abakhenkethi kuyeyona nto iphambili kwi-Arhente kwiNtlanganiso yama-64 yeKhomishini yeNgingqi ye-World Tourism Organisation (UNWTO) ye-Yurophu, ebibanjelwe eZagreb, eCroatia kule veki (27-30 Meyi).
ICroatia yonyulwe ngamxhelomnye ukuba isingathe intlanganiso yonyaka yabaphathiswa bezokhenketho bamazwe angamalungu e-UNWTO eYurophu. Ilizwe yenye yeendawo zokhenketho zommandla, zamkela abafikayo abazizigidi ezingama-20 ngonyaka ka-2018, ukonyuka nge-6.7% kunyaka ophelileyo. Iqabane elomeleleyo le-UNWTO, ilizwe likhaya kwiZagreb Sustainable Tourism Observatory, eyinxalenye ye-UNWTO Network ye-Sustainable Tourism Observatories.
Intlanganiso ibizinyaswe ngabameli bamazwe angamaLungu angaphezu kwama-40, inqanaba lerekhodi lokuthatha inxaxheba kwinqanaba eliphezulu kwiKhomishini yeNgingqi yaseYurophu. UNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili udibene neNkulumbuso u-Andrej Plenković ukumbulela ngokuzinikela kweCroatia kukhenketho oluzinzileyo. Umnumzana Pololikashvili uphinde wadibana noNks Marija Pejcinovic Buric, Umphathiswa Wezangaphandle kunye neMicimbi yaseYurophu kunye noMphathiswa Wezokhenketho waseCroatia, uGari Capelli, kwiingxoxo ezikwinqanaba eliphezulu kulawulo lwendawo ekuyiwa kuyo kunye nozinzo.
"Kuyakhuthaza kakhulu ukubona kungekuphela nje abaphathiswa abaninzi bezimanya nathi apha eZagreb, kodwa nokubonelela ngenzondelelo yokwenyani enamazwe angamaLungu aseYurophu anayo kulawulo lwezokhenketho kwaye alusebenzise njengomqhubi wophuhliso oluzinzileyo," utshilo uMnu Pololikashvili. “Intsebenziswano yengingqi neyamazwe ngamazwe ibalulekile ukujongana nemiceli mngeni enxulumene nenani labakhenkethi, ingakumbi kwiindawo ezisezidolophini. Intlanganiso yale veki ibiseZagreb ingqina umnqweno wokwenza ukhenketho lube yimpembelelo entle. ”
Umphathiswa Wezokhenketho waseCroatia, uGari Capelli, wongeze wathi: “ICroatia iyazingca ngeyona ndlela kwaye ibambe iwonga ngokusingatha le ntlanganiso. Ezokhenketho ziyinjini yeenkqubo ezininzi zophuhliso, ezinamandla okudala imisebenzi emitsha kunye nesixhobo sokukhusela ilifa lemveli nendalo. Eli lithuba elihle lokukhokela ngokudibeneyo imikhwa kunye nemigaqo-nkqubo kwicala elifanelekileyo. Ndiqinisekile ukuba xa sisonke sizakuqhubeka nokufumana iimpendulo ezichanekileyo kuyo yonke imibuzo evulelekileyo kwaye sihlanganise umendo wokhenketho oluthembekileyo, olugcinekileyo nolunesimilo. ”
Kwimeko yentlanganiso yabaphathiswa, amacandelo karhulumente nawabucala ahlanganisene kwiWorkshop ekhethekileyo yoQoqosho, uBuchule kunye neNtsebenziswano. Amalungu aManyeneyo e-UNWTO kubandakanya i-Amadeus, i-ICCA, iNiantic kunye neGoogle, zivelisa iimveliso ezijolise ekuphuculeni ulawulo lokhenketho kunye nozinzo.
Ngapha koko, uNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili udibene noDavor Suker, uMongameli weCroatia Federation Federation, ukuxoxa ngamathuba aziswe lurhwebo olukhulayo lokhenketho lwezemidlalo.
mngeni okhethiweyo khomishini ukuzibophelela Udibanisa intsebenziswano creative Khroweyishiya nkcubeko inkcubeko elilifa lethu Ulawulo lokuHamba icala Xoxa iingxoxo umqhubi injini yokuziphatha aseYurophu Ukhenketho lwaseYurophu ubuso umanyano fumana football amandla Ngaphandle kulungile Uphando likhula growing market khokela kubanjwe ilifa ikhaya uzukisiwe umkhosi ukusingatha I-ICCA ezintsha ezintsha abafika kumazwe ngamazwe intsebenziswano yamazwe ngamazwe imisebenzi ukujoyina nje nxu lumene Ukulawula ukudibana umhlangano ilungu Amazwe aseLungu amalungu wahlangana ngumphathiswa Umphathiswa Wezokhenketho umlungiseleli abaphathiswa Mr Ms endalo womnatha imisebenzi emitsha amanani ukujonga Mathuba ithuba Ntlangano ukuthatha inxaxheba iqabane intsebenziswano indlela Nkqubo Pololikashvili zisiwe Prime Usosiba jikelele abucala iinkqubo iimveliso ukhuselo abanekratshi amacandelo karhulumente nawabucala imiba irekhodi kwingingqi xanduva kunene Kuvuka uthi unobhala unobhala jikelele amacandelo ukubona ezizodwa zemidlalo ukhenketho kwezemidlalo Ithi Melele nokuzinza ezizinzileyo Uphuhliso oluphathekayo ukhenketho oluzinzileyo Ummandla isixhobo Iindawo zokhenketho ulawulo lokhenketho abaphathiswa bezokhenketho iinombolo zabakhenkethi ekwizinga I-UNWTO Unobhala weUNWTO edolophini kubalulekile Iveki kwamkela ubungqina workshop Ukhenketho lweHlabathi Umbutho wezoKhenketho kwiHlabathi liphela Zagreb UZurab Pololikashvili